မိသားစုပိုင်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကို ရိုးရှင်းတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး တတ်ရောက်ခဲ့တဲ့ သဇင်ထူးမြင့် – Suehninsi
သဇင်ထူးမြင့်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး အေးချမ်းစွာ လှရက်လွန်းနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက်ကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါနော်..။ ဝါရင့်ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အနုပညာအမွေတွေကို
ရရှိထားပြီး အကယ်ဒမီရွှေကြိုကနေ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ေ ယာက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သဲကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့
လှသွေးကြွယ်နေပြန်ပါတယ်နော်..။သူမတို့မိသားစုပိုင်တဲ့ “အညာမြေစားဖွယ်စုံ” ဆိုင်(၁)ဖွင့်ပွဲလေးကို တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရိုးရှင်းအေးချမ်းတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံဖက်ရှင်လေးနဲ့ မြင်သူတိုင်းကို အမြင်အေးစေတာလည်း တွေ့ရမှာပါနော်..။ “အညာမြေစားဖွယ်စုံ ဆိုင် (၁) ပြန်ဖွင့်ပါပြီ …. ဆိုင်ဖွင့်ပွဲနေ့က ပုံလေးတွေပါ..”
ဆိုပြီး သူမရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို သဲ ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ချစ်ရတဲ့ သဲရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ရိုးရှင်းအေးချမ်းစွာ လှနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး အချစ်တွေ တိုးနေကြမှာ အသေအချာပဲမို့ အသည်းလေးတွေ ပေးသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်..။
သဇငျထူးမွငျ့လို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ ခဈြစရာကောငျးပွီး အေးခမျြးစှာ လှရကျလှနျးနတေဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျကို ပွေးမွငျမိကွမှာပါနျော..။ ဝါရငျ့ဇာတျပို့သရုပျဆောငျခငျလှိုငျရဲ့ သမီးခြောလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ သူမကတော့ ဖခငျဖွဈသူရဲ့ အနုပညာအမှတှေကေို
ရရှိထားပွီး အကယျဒမီရှကွေိုကနေ အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာခဲ့သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ေ ယာကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ သညျးသညျးလှုပျအားပေးဝနျးရံမှုတှကေို အမြားဆုံးရရှိထားတဲ့ သဲကတော့ အခုတဈခါမှာလညျး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးနဲ့
လှသှေးကွှယျနပွေနျပါတယျနျော..။သူမတို့မိသားစုပိုငျတဲ့ “အညာမွစေားဖှယျစုံ” ဆိုငျ(၁)ဖှငျ့ပှဲလေးကို တကျရောကျခဲ့တာဖွဈပွီး ရိုးရှငျးအေးခမျြးတဲ့ မွနျမာဝတျစုံဖကျရှငျလေးနဲ့ မွငျသူတိုငျးကို အမွငျအေးစတောလညျး တှရေ့မှာပါနျော..။ “အညာမွစေားဖှယျစုံ ဆိုငျ (၁) ပွနျဖှငျ့ပါပွီ …. ဆိုငျဖှငျ့ပှဲနကေ့ ပုံလေးတှပေါ..”
ဆိုပွီး သူမရဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို သဲ ပရိသတျတှကေို ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျနျော..။ ခဈြရတဲ့ သဲရဲ့ပရိသတျတှကေလညျး ရိုးရှငျးအေးခမျြးစှာ လှနတေဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အခဈြတှေ တိုးနကွေမှာ အသအေခြာပဲမို့ အသညျးလေးတှေ ပေးသှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့ဦးနျော..။